Mahaleo, tarika. Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika
ⓘ Mahaleo, tarika. Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika mpihira iray avy ao Madagasikara. Taminny taona 1972, nandritra ny tolonny mpianatra no niforonanny ..
Ny fehezanteny dia teny na andian-teny tononina na soratana manara-pitsipika ka azo ampitana hafatra mahaleo tena noho izy azo sarahana aminny hafa izay mety hitovy asa aminy. Raha soratana ny fehezanteny dia azo ampanombohina aminny sora-baventy ka faranana aminny teboka, ary izany tokoa matetika no famaritanny boky fianarana fitsipiteny ho anny ankizy azy. Ny fehezanteny ahitana teny roa na mihoatra no tena mateti-piseho, nefa raha teny iray no mamorona ny fehezanteny dia matetika isanny sokajin-teny afaka mahaleo tena, toy ny anarana sy ny matoanteny sy ny mpamari-toetra ary ny tenim-pi ...
Ny fehezankevitra dia matetika andian-teny ahitana entimilaza sy lazaina izay hita anaty fehezanteny iray. Ny entimilaza ao aminny fehezankevitra iray dia matetika matoanteny, nefa mety ho sokajin-teny hafa toy ny mpamari-toetra na ny anarana na ny zana-tsokajin-tambinteny sasany izany arakaraka ny fiteny sy ny fahafahanny fiteny. Ny fehezankevitra iray dia mety tsy hahitana afa-tsy teny tokana, dia ny matoanteny na ny mpamari-toetra sns izay misahana na tokony hisahana ny anjara asa entimilaza ihany. Ny fehezanteny iray dia mety hahitana fehezankevitra iray na maro ka raha maro izany dia ...
Ny reniteny dia teny azo sarahina aminny namany ka afaka mahaleo tena sady manana hevitra mazava na dia tsy misy teny hafa milaza ny anjara asany sady tsy natao hilaza ny anjara asanny teny hafa koa izy. Ny mifanohitra aminy dia ny zanateny izay teny tsy afaka mahaleo tena sady natao hilazana ny anjara asanny reniteny na natao hampifandraisana azy ao anaty tarika na fehezankevitra na fehezanteny. Sokajin-teny maromaro no ahitana reniteny, dia ny anarana, ny mpamari-toetra, ny tambinteny, ny matoanteny, sns. Miovaova arakaraka ny fiteny ny lisitry ny sokajin-teninny reniteny. Ny mampiavaka ...
Ny zanateny dia teny tsy azo sarahina aminny namany ka tsy afaka mahaleo tena sady atao hilazana ny anjara asanny teny hafa na natao hampifandraisana teny roa hafa ao anaty tarika na fehezankevitra na fehezanteny. Ny mifanohitra aminy dia ny reniteny izay teny afaka mahaleo tena. Maro ny sokajin-janateny aminny fiteny iray, dia ny mpampitohy, ny mpampiankina, ny mpisolo, ny mpamaritra, ny mpanoritra, sns. Miovaova arakaraka ny fiteny sy ny hevitry ny mpahay teny ny lisitry ny sokajin-teninny zanateny. Miavaka aminny reniteny ny zanateny noho izy ireo voafetra isa, sarotra miforona, miasa m ...
Ny filaza toe-javatra dia endriky ny matoanteny izay matetika afaka mitana ny anjara asanny fameno toe-javatra. Ahitana filaza toe-javatra ny fiteny latina, frantsay, anglisy, espaniola, portogey, rosiana, italiana, romaniana, katalàna, sns, nefa tsy mitovy ny anjara asa sahaninny matoanteny aminny filaza toe-javatra ao aminny fehezanteny isam-piteny.
ⓘ Mahaleo (tarika)
Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika mpihira iray avy ao Madagasikara. Taminny taona 1972, nandritra ny tolonny mpianatra no niforonanny tarika izay ahitana ani Dama, Dadah, Bekoto, Charles, Nonoh, Fafah ary Raoul.
Nitondra tsioka vaovao teo aminny zava-kanto malagasy ity tarika ity taminizany, taminireo hirany maneho fanoherana ny tsy rariny, fitakiana zo, miventy ny fitiavana, ny fifankatiavana ary ny fahafatesana koa aza.
Niforona taminny taona 70 tao Antsirabe., nandritra ny fihetsehanny mpianatra izay nahtonga ny fianjeranny fitondrana taminizany. Taminny volana mai 1972 i Dama, Dadah, Bekoto, Fafah, Nono, Charles sy Raoul no naomboka niaraka, ary nadritra ny grevy taminizany, izy ireo no nanafana sy nanentana ny fotoana nadritra ny grevy taminny Hira. Rehefa nahavita ny fianarany izy ireo, dia tao no lasa Dokotera, Dokotera mpandidy, Mpamboly ou Mpandinika Fiaraha-monina, na dia izany aza dia mbola nitohy foana ny fiarahany nihira. Ny 3 septambra 2010 dia nandao azy ireo i Raoul taminizy 59 taona ka dia enina sisa izy ireo.
Wikipedia: Mahaleo (tarika)